Futhi i-Afrika nayo yayinenguquko yayo eluhlaza? - Afrikhepri Foundation
Futhi i-Afrika nayo yayinenguquko yayo eluhlaza?
LIphrojekthi ye-Solar Roadways iqukethe imigwaqo ehlanganisiwe, izindlela zomgwaqo nezindawo zokupaka izimoto ezinama-slabs afakwe izinzwa. Amapaneli elanga alungile, kepha ukufakwa kwesikali esikhulu kuthatha isikhala. Ngakho-ke umqondo wokuba nawo ezikhaleni osuvele usetshenziselwe okunye.
Lo ngumbono kaScott Brusaw, unjiniyela waseMelika owakha ugesi, ekhaya lakhe e-Idaho iphrojekthi yeSolar Roadways kuhlose ukumboza imigwaqo, amapaki ezimoto, izindlela zomgwaqo ezinabaqoqi abaningi bamandla elanga, abakwazi ukusabalalisa kabusha ugesi owenziwa ngaleyo ndlela endaweni ezungezile, ngendlela esatshalaliswe ngokuphelele: izakhiwo, izitolo, izimpawu, izibani zasemadolobheni.
Isethulo sohlelo lweSolar Roadways
UScott Brusaw wethule i-21 ngo-Ephreli odlule umkhankaso womphakathi nge-Indiegogo iwebhusayithi. Inhloso: ukukhulisa u- $ 1 million ngoMeyi 31 ukuthuthela esigabeni sokukhiqiza sohlelo. Ngoba isibonelo esivele sikhiqizwe ngunjiniyela, eduze negaraji lakhe, ngosizo lwe-Federal Highway Administration, enentshisekelo kulo msebenzi, yabela ama-750000 dollars.
Okungekho-slip nokuqina okukhulu
Ngokuqondakalayo, uSolar Roadways wethulwa njengomhlangano wamathayili ayizinhlangothi eziyisithupha angama-55 kg, enziwe ngoxhaso lweplastiki olwenziwe kabusha futhi lumbozwe ngamapuleti engilazi. Baye bahlolwa elebhu ukumelana nomthelela, isisindo nengcindezi yezimoto (uhlobo lwendalo lusekela amathani ayi-125), kanti ingilazi ikhiqiza kabusha ukuthungwa kwe-asphalt ukuvimbela ukushelela.
Isivivinyo sokuphikiswa kwe-slab solar
Isilayidi siqukethe abaqoqi belanga kuma-69% obuso baso okwamanje, kodwa futhi sihlanganisa nohlelo lokuhlanza kabusha olufana nolwamawindi angemuva ezimoto, nama-LED ahloselwe ukubonisa imiyalezo nokusayina phansi.
Akunasidingo sokunyakazisa ukuhlelwa kwedolobha
Iheksagoni ngayinye iqukethe ne-microprocessor eyivumela ukuthi ikwazi ukuxhumana nomakhelwane bayo abayisithupha. Ngakho-ke umhlangano usebenza kwinethiwekhi, ngenhloso yokwenza izexwayiso uma kwenzeka kungasebenzi kahle (noma kwebiwa) kwesilayidi.
Ngokwezibalo zikaScott Brusaw, indawo yokupaka engamakhilomitha-skwele angama-31250, izindlela zokuhamba, izinkundla zokudlala, izindlela zomgwaqo, izindlela zebhayisikili nokuningi, noma amakhilomitha-skwele angama-80937 XNUMX, angaxhashazwa e-United States, ngaphandle kokuphazamisa ukwakheka kwedolobha noma ukumiswa koxhumano lomgwaqo.
Futhi, ngokusho konjiniyela, isiminyaminya nezindawo zokupaka eziminyene ngeke zivimbele uhlelo ukuthi lusebenze ngoba kulezi zimo kuhlale kunendawo enkulu engamboziwe, njengoba kufakazelwa yizithombe zasemoyeni eziqhakazile Imibuzo Evame Ukubuzwa Iwebhusayithi yeSolar Roadways.
Kusetshenziswe okungu-18 kusuka ku-1,74 €
Thenga i- € 1,74
Kugcine ukubuyekezwa ngoMeyi 7, 2021 11:40 PM
Incwadi ka-Enoke, umbhalo wasendulo owembula ukudalwa komhlaba
Imivubukulo Engavunyelwe - Ukusuka e-Atlantis kuya eSphinx (PDF)
I-Stolen Legacy (Umusa)
Izincwadi ezivela kumaMahatmas (PDF)